इटालियन र धेरै शताब्दीयौंदेखि फ्रान्सेली पनीर मोल्ड संग, साथै रोटी र रक्सी यी देशहरूमा भोज को एक अपरिहार्य विशेषता छ। र यहाँ हामी यो उत्पादन यति लामो पहिले छैन देखा छ, तर पहिले नै Gourmets बीच धेरै लोकप्रिय।
राम्रो, यो उत्पादन को नोक्सानी मिति छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। तर हामी यो कुरा मा हेर्न अघि, तपाईं ध्यान दिएर यो विदेशी उत्पादन हाम्रो लागि अध्ययन गर्नुपर्छ। को संरचना फरक मोल्ड छ जसमा पनीर, विभिन्न प्रकारका पहिचान। उत्पादन को पहिलो प्रकारको सेतो कोटिंग संग topped, समावेश गरिएको छ। यो सबैभन्दा धेरै समूह छ। सेतो मोल्ड को Cellars मा पनीर राख्दै गठन गरिएको छ। आफ्नो पर्खाल मा रोगनाशक ओषधि च्याउ ढाकिएको छन्।
निम्न प्रजाति लागि विशेषता-greenish नीलो मोल्ड उत्पादन भित्र समावेश। यो र "Roquefort" "को भाला देखिए d'Ambert को" पनीरों छ। को मोल्ड उत्पादन को उत्पादन प्रक्रिया मा curd ठूलो मा विशेष ट्यूब को माध्यम द्वारा थपिएको छ।
त्यहाँ पनीरों डाटा अर्को प्रकारको छ। यो पहिलो समान, तर मात्र हो जो सेतो र रातो फरक मोल्ड को, रंग छ।
पनीर, रकम प्रति दिन पचास ग्राम अधिक छैन यो प्रयोग गर्दा जो को लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ, तपाईं ठूलो परिमाणमा आफ्नो आहार मा समावेश गर्नुपर्छ। त्यो nutritionists वजन झुकाउ भएका ती मानिसहरूले सिफारिस छैन। साथै मोल्ड को प्रयोग, त्यसैले अहानिकारक नहुन सक्छ। ठूलो परिमाणमा, यो आन्द्रा को microflora सम्बन्धित अनावश्यक समस्या बढाउँछ जो पेट, प्रक्रिया छैन।
पनीर, जो प्रयोग पक्कै पनि यसलाई क्याल्सियम को ठूलो मात्रा समावेश judicious प्रयोग गरेर प्राप्त हुनेछ। यो उत्पादन को संरचना मा यो तत्व सबैभन्दा कारण महान च्याउ उपस्थितिको शरीर द्वारा अवशोषित हुन्छ।
मोल्ड संग पनीर, जो प्रयोग फस्फोरस र धेरै भिटामिन को लवण को राशि हाम्रो शरीर गर्ने अधिकार सामग्री पनि समावेश गरिएको छ, यो बोसो भंग गर्न मद्दत गर्छ। यो उत्पादनमा प्रोटिन आफ्नो मांसपेशिहरु निर्माण गर्ने एमिनो एसिड मा धनी छ।
मोल्ड संग पनीर, melanin को उत्पादन को प्रवर्द्धनमा अझै पनि छ, जो को प्रयोग, किनभने ट्रेस तत्व को यो महत्त्वपूर्ण कार्य कार्य, मानव छाला अन्तर्गत accumulates। यस्तो प्रभाव सामान्य मानव गतिविधिको लागि अत्यावश्यक छ।
रोगनाशक ओषधि - मोल्ड एंटीबायोटिक एक प्राकृतिक स्रोत हो। हाम्रो शरीर एक पदार्थ Staphylococcus जीवाणुहरु र streptococci, साथै को एजेन्ट नाश छ Anthrax र भ्यागुते रोग। रोगनाशक ओषधि को microflora मा लाभकारी प्रभाव छ देखि पनीर र, normalizes आंत्र समारोह।
नीलो पनीर को प्रयोग रगत हेमोग्लोबिन को स्तर हुर्काउन योगदान पुग्छ। यो कारणले गर्दा आवश्यक एमिनो एसिड को उत्पादन मा उपस्थिति गर्न सम्भव छ - histidine। यो रातो र सेतो रक्त को संश्लेषण लागि महत्त्वपूर्ण छ। Histidine गैस्ट्रिक रस को सुधार गर्न योगदान र vasodilating प्रभाव उत्पादन गर्छ। पनीर मोल्ड फस्फोरस को एक ठूलो रकम छ। यसरी तत्व को स्कोप माछा धेरै विविधता घमण्ड गर्न सक्दैन। फस्फोरस हड्डी र नङ, र दाँत लागि अत्यावश्यक छ। यो विकास रोक्न निवारक उपाय रूपमा सेवा गर्दैछन् , गठिया, arthrosis को चयापचय, हृदय र स्नायु प्रणाली सुधार गर्छ।
छेउमा पकवान र कसरी यो चाँडै तयार के हो?
Fouette (ससेज): palatability, विशेष गरी पकाउने, समीक्षा
Maltose सिरप - एक आहार sweetener
वृद्ध आफन्त हेरचाह
पूर्वानुमान अनुसार, 20 वर्ष भन्दा बढी, सौर गतिविधि 60% द्वारा, जसबाट तापमान कम कम हुनेछ
मानव व्यवहारमा आत्म-सम्मान प्रभाव छ? मानिसहरूको व्यवहार प्रभावित कि आत्म पक्षहरू